नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेना - विकिपिडिया
यस लेखमा कुनै भरपर्दो स्रोत जोडिएको छैन। कृपया यो लेख सुधार्न भरपर्दो स्रोत जोडेर सहयोग गरिदिनुहोला। स्रोत जोडेर पुष्टि नगरिएका सामग्रीलाई चुनौती गर्न वा हटाउन सकिने छ।
नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेना नेपाली कांग्रेसको लडाकू दस्ता थियो। मुक्ति सेनाको गठन बैरगनियामा रणनैतिक सम्मेलनबाट वि.सं. २००७ मा भएको थियो। अहिंसात्मक आन्दोलनबाट जनताको सर्वोच्चता प्राप्त हुन नसक्ने परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २००७ असोज १० र ११ (सन् १९५० सेप्टेम्बर २६ र २७)मा रौतहटको सीमानामा रहेको वैरगनियामा रणनैतिक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।
यस सम्मेलनले 'शसस्त्र क्रान्तिबाट मात्र देशमा परिर्वन सम्भव छ' भन्ने ठहर गरी सो क्रान्तिको सुप्रिम कमाण्डर पार्टी सभापति मातृका प्रसाद कोइरालालाई बनाउँदै भित्री रूपले त्यसको सञ्चालनको बागडोर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र सुवर्ण शमशेर राणालाई जिम्मा लगायो। क्रान्ति सम्पन्न भएपछी मुक्ति सेनालाई दिल्ली सम्झौता अनुसार रक्षा दलमा परिणत भयो ।
सिंहदरबार बिद्रोह[सम्पादन गर्ने]
दिल्ली सम्झौता अनुसार मोहन शमशेर नै प्रधानमन्त्री हुने भएपछी कुँवर इन्द्रजित सिंह लगायतहरू असन्तुष्ट भए। उनीहरूले हतियार बुझाउन मानेनन् र सशस्त्र हमला जारी नै राखे। उनलाई भैरहवामा समातियो र सिंहदरबारमा कैद गरिएको थियो। काठमाडौँ ल्याइएका सिंह रक्षा दलमा परिणत भएको मुक्ति सेनाको सहयोगमा विद्रोह गरी मुक्त भएका थिए। 
↑ "किन असफल भयो सिंहदरबार विद्रोह ?", अन्नपूर्ण पोस्ट, अन्नपूर्ण पोस्ट, ०६ माघ २०७४, अन्तिम पहुँच २०७८ जेठ २६।
↑ "मुक्ति सेना र राणा सेनाका कमान्डरको अनाैठो मित्रता इतिहासको त्यो एल्वम", कान्तिपुर, फाल्गुन ९, २०७२, अन्तिम पहुँच २०७८ जेठ २६।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=नेपाली_कांग्रेसको_मुक्ति_सेना&oldid=1015546" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २१:११, ९ जुन २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।